नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकला- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकला
नेपाली कारागारहरु राजनीतिक बन्दीका निम्ति भनेर बनिएनन् । राणाहरु ढुक्क थिए किनकि उनीहरुले सम्पूर्ण नेपाल नै कारागारको मोडेलमा व्यवस्थित गरेका थिए ।
कार्तिक १५, २०७७ अभि सुवेदी
वास्तुकला र न्यायप्रणालीको सम्बन्धको विषय कानुनी वा अदालती मात्र नभएर नाट्य रङ्गकर्म र उत्तरऔपनिवेशिक अध्ययनसँग पनि जोडिएको छ । त्यो वास्तुकला कारागारको रचनासँग जोडिएको कुरा छ । यसमा सोझै पश्चिमी, खासगरी युरोपेलीहरूका कारागार, कैदी र न्याय गर्ने पद्धतिका छलफल र शास्त्र जोडिएका छन् ।
युरोपेलीहरूले कानुन, दण्ड, फैसलाका न्यायप्रणाली, अदालत र कारागारको आर्किटेक्चरका आफ्ना शैली र मोडल एसिया र अफ्रिकाका उपनिवेशमा पनि लगे । उपनिवेशवादी शासकले कारागारमा भन्दा अदालतको वास्तुशैलीमा युरोपेली मोडेल प्रयोग गरे । ब्रिटिस भारतको सबभन्दा पुरानो कलकत्ताको हाइकोर्ट, लाहोर हाइकोर्ट भवनहरू केही उदाहरण हुन् ।
कारागारका निर्माण गर्दा भने तिनले एउटा हाइब्रिड शैलीको प्रयोग गरे जुन नियन्त्रण र प्रतिरोधको द्वन्द्वबाट जन्मिएको थियो । नेपालमा पश्चिमी उपनिवेश नभएको कारणले अदालत वा कारागार रचनामा युरोपेली मोडेलको प्रयोग भएन । न्याय र कारागारको क्षेत्रमा यहाँ छुट्टै किसिमको प्रयोग भयो ।
पश्चिमीहरू कारागारको वास्तुरचना र यसको विकाससँग न्यायप्रणाली, दण्डप्रणाली र सुधारका कुरा जोड्थे । फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोको ‘डिसिप्लिन् एन्ड पनिस : द बर्थ अफ् दी प्रिजन्’ (१९७९) अथवा नेपालीमा ‘अनुशासन र दण्ड : कारागारको जन्म’ भन्ने किताबमा यो विषय छलफल गरेका छन् । फुकोले जेरमी बेन्थाम (१७४८–१८३२) नाम भएका अंग्रेज दार्शनिक, वकिल र उपयोगितावादी दर्शनका प्रवर्तकले कारागारको वास्तुकलासँग न्यायप्रणालीलाई जोडेको धारणा निकालेका छन् । जेल हाल्नेको शक्तिलाई बेन्थामले एउटा सरल कारागार रचनाको मोडेलमा राखे । उनको यो सिद्धान्तलाई ‘प्यानोप्टिकन्’ वा सर्वत्रदृष्टि भनियो । उनले यस्तो कारागारको मोडेल निकाले, जहाँ जेलभित्र बस्ने सबैलाई बाहिरबाट रखबारी गर्नेले देख्न सकोस् । यो कारागार वृत्ताकारको हुनुपर्छ । यसरी सधैं देखिरहँदा कैदीसँग मानवीय सम्बन्ध कायम हुन्छ । कैदीले फेरि अपराध नगर्ने अठोट गर्छ । यसले कारागारको सुधारमुखी मोडेल देखायो । युरोपलीले आफ्ना उपनिवेशहरूमा बेन्थामको मोडेल प्रयोग गरेनन् । नियन्त्रणमुखी कारागार बनाए त्यतातिर ।
वास्तुकला र न्यायप्रणाली बृहत् विषय भए पनि यहाँ अदालतले गरेका जेल पठाउने फैसलाहरूको कारागारको वास्तुकलांसँग के सम्बन्ध हुनेरहेछ भन्ने विषयमा मात्र केही कुरा राख्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ । दण्ड दिने र दण्डितको सम्बन्ध कारागारको रचनामा प्रतिविम्बित हुन्छ । अधिनायकवादीका शाश्वत् मोडेलमा सरकारहरूले दिएका फैसला र कैदी बस्ने रचनाको सोझो सम्बन्ध कारागारहरूको वास्तुरचनाले देखाउँछ । यस्ता अमानवीय कारागारहरूका मोडल युरोप, एसिया र अरू मुलुकमा विभिन्न समयका शासनप्रणालीहरूअन्तर्गत बनिए । आज पनि बनिन्छन् ।
कोभिड–१९ ले नेपालका जेलहरूको अवस्था व्यापक रूपमा मिडिया र अरू बहसमा आएकाले गर्दा पनि पहिलेदेखि आफूले अध्ययन गरिआएका केही कुराहरूको सान्दर्भिकता जोडिएको हो । नेपालको न्यायप्रणाली कारागारको बनावटलाई कुनै वास्ता नगरी फैसला गर्ने वा कानुननको व्याख्यामा वास्तुकलाको खासै विचार नगर्ने पद्धतिमा अडिएको छ । यो पश्चिमी शैलीका दरबारमा बस्ने राणा शासक र तिनका भाइभारदारहरूले माथि बसेर तल कराउनेलाई न्याय दिने प्रणालीसँग जोडिएको छ । त्यसलाई बुर्जा प्रणाली भनेको छु । विडम्बना, न्यायमूर्तिहरूले गरेका फैसलाहरूमा पनि दण्डित कहाँ लगिन्छ वा कस्तो अवस्थामा उसलाई राखिन्छ भन्ने कुराको न्यून चिन्तन हुन्छ । संकटमा परेका जनतालाई राज्यले केही गर्दैन, तिमीहरू आफैं गर भन्ने भनाइको अन्तर्यमा त्यही राणाकालीन बुर्जा न्यायप्रणालीको अवचेतन बोल्छ । मार्क्सवादी दार्शनिक फ्रेडरिक जेमिसन्का विचारमा इतिहासको पनि अवचेतन मन हुन्छ ।
‘कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाका अनुसार हाल देशभरि ७४ कारागार छन् । जम्मा १६ हजार राख्ने क्षमता भएका नेपालका यी कारागारमा २४ हजार ७ सय ७३ जना कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राखिएका छन्,’ (नयाँ पत्रिका १६ असोज) । यो अहिले कोभिड–१९ को कारणले मात्र थाहा भएको हो । कारागारहरूका वास्तुरचना, तिनका बनोट र आकारहरू नेपालका कुनै पनि राज्यसत्ता र व्यवहारमा सधैं अदृश्य रहेका विषय हुन्, जुन त्यही कैदी र न्यायको निरपेक्ष सम्बन्धबाट जन्मिएका हुन् । यो माथि भनेको एकतन्त्री न्यायप्रणाली र वास्तुकलाले, थाहा पाएरै वा नपाई, नेपालमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र आएपछि पनि निरन्तरता पाइरह्यो । यसको अर्थ न्यायप्रणाली, फैसला र दण्डितको बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्ध वास्तुकला वा कारागार व्यवस्थापनमा देखिन्छ । यो सम्बन्धले गहिरो प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ ।
न्यायप्रणालीमा एक प्रकारको उता जे होस्, बन्दी जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा रहुन् मुख्य कुरो कानुनको व्याख्या र फैसला हो भन्ने संस्कृतिले निर्देशित गरेपछि त्यहाँ मानिस तत्त्व हराउन थाल्नु स्वाभाविक हो । यो बुर्जा–न्यायको प्रेत वास्तुरचनाको उदासीनतामा देखिन्छ । गहिरो अर्थमा, दण्ड दिने र पाउने पद्धतिभित्र जसरी बिस्तारै मान्छे तत्त्व हराउँदै जान्छ त्यसले न्याय गर्ने धर्मलाई असर पार्दैन भन्न सकिँदैन । न्याय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमा देखापर्ने ‘फ्रस्टेसन्’ त्यो राणाकालीन संस्कारको अवशेषप्रतिको दिक्दारी हो ।
आफू कानुन व्यवसायी नभएकाले यस विषयमा जानकार नभए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको किताब ‘न्याय’ (२०७५) र यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लेखहरू पढ्दा केही जानकारीहरू पाउँदै आएको हुँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लेखे, ‘कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन’ (कान्तिपुर, साउन २९, २०७७) । यी न्यायकर्मीले न्यायपालिकालाई ‘इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको’ भनेर लेखेको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको कान्तिपुर (४ असोज) मा नै प्रकाशित अर्को त्यस्तै धारको लेख पढ्ने अवसर मिल्यो । उनले ‘न्यायपालिकाका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, मुद्दामा ढिलाइ, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा, न्यायपालिकाप्रति जनताको घट्दो आस्था र विश्वास किन, कसरी’ भयो भन्दै प्रधानन्यायाधीशले विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने राय दिएका छन् । अनेकौं आलेख छन् ।
सिंहदरबार ९ जुलाई १९७३ मा जल्यो, तर त्यसको फसाद वा अगाडिको खण्ड ज्यानको बाजी लाएर सैनिकहरूले बचाएका कुरा विदित भएकै हुन् । राणा शासनमा न्याय खोज्न जाने वा कराउन जाने जनतालाई दरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीदेखि अनेकौं तहका राणा शासकहरूले माथि बुर्जा वा बरन्डाबाट सोधेर न्याय दिने चलन धेरै काल रह्यो । मेरा पिताजी र उहाँका भतिजा मेरा दाजु कवि पहलमान सुवेदी तेह्रथुमदेखि पन्ध्र दिन हिँडेरै आएर एक शताब्दीअघि मानिसहरूसहित लिएर राणा दरबारमा कराउँदाको घटना उनले कवितामै सुनाएको सम्झना छ ।
मलाई यो घटनाले नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकलाको वा भवन निर्माणको सम्बन्धले धेरै कुरा भन्ने रहेछ भन्ने लागेको हो । अप्रिल २९ देखि मे १७, १९७७ सम्म विशेष अदालतमा बीपी कोइरालाले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेपछि पहिलोपटक त्यो दरबार–जनिन वास्तुकलाको बुर्जा न्यायप्रणालीमाथि चुनौती भएको हो । पछि उनको अदालतको बयान शीर्षकमा आएको पाठलाई समेत आधार राखेर मैले लेखेको नाटक ‘सान्दाजुको महाभारत’ (२०७३) मा यही कुराको नाटकीकरण गरें । त्यस नाटकमा त्यसरी न्याय खोज्दा दरबारको कौसीमा बसेका राणा शासकलाई पहलमानले कराएको दृश्यलाई मञ्चमा मिलाउने क्रममा भारतको नेसनल् स्कुल अफ् ड्रामाबाट उच्च अध्ययन गरेका विमल सुवेदी नामका यो नाटकका निर्देशकले गरेको काममा दर्शकले बुर्जा न्यायका प्रेतको दृष्टिगोचर नाटकीय रूप देखे ।
अविभाजित ब्रिटिस–भारतका हाइब्रिड शैलीका कारागारहरू अपराधीलाई भन्दा राजनीतिक बन्दीहरूलाई ठीक लगाउने वास्तुशैलीमा बनिएका थिए । विभाजन हुँदा भारत र पाकिस्तानले त्यही औपनिवेशिक विरासत बाँडेर लिए । तिनका जेलका वास्तुकलामा त्यही औपनिवेशिक भूत अझै हावी छ भन्छन्, समीक्षक । अध्येता महुया बन्दोपाध्यायको विचारमा अङ्ग्रेजका औपनिवेशिक नियन्त्रणकारी जेललाई राष्ट्रवादीले प्रतिरोध गर्ने आम ‘स्पेस’ को रूपमा पनि प्रयोग गरेकाले ती विरोधाभासपूर्ण संरचना थिए ।
नेपाली कारागारहरू राजनीतिक बन्दीका निम्ति भनेर बनिएनन् । राणाहरू ढुक्क थिए किनकि उनीहरूले सम्पूर्ण नेपाल नै कारागारको मोडेलमा व्यवस्थित गरेका थिए । तिनै जेलमा सेल् बनाए, जहाँ केही राजनीतिक बन्दीलाई र अरू कैदीलाई पनि पटकपटक राखे । खड्गमान सिंहले लेखेको ‘जेलमा बीस वर्ष’ पठनीय छ । तिनै जेलमा कवि चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र कलाकार चन्द्रमान मास्के अनि गणेशमान सिंह पनि थिए । जेलमै मास्केले हृदयको ‘सुगत सौरभ’ महाकाव्यको निम्ति पेन्टिङ बनाए । छापिएका छन् । तिनै जेलबाट गणेशमान सिंह भागे, सीपी मैनाली, प्रदीप नेपालहरू सुरुङ खनेर उम्किए । केआई सिंह सिंहदरबार कारागारबाट भागे । लाग्छ, राजनीतिक बन्दीहरूका निम्ति अलग वास्तुकलाजन्य कारागार बनिएनन् । सुन्दरीजल बन्दीगृह एउटा अस्थायी व्यवस्था थियो । नेपाल उपत्यकामा सेन्ट्रल जेल, नख्खु जेल र बाहिर जिल्लाका उपेक्षित कारागारहरूमा कैदी लगेर थुन्ने एउटा प्रक्रिया थियो, जसको विषयमा आलिसान भवनबाट न्याय सुनाउनेहरूलाई कुनै चासो थिएन, तात्त्विक रूपमा अहिले पनि छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनहरू भैसकेपछि पनि अदालतहरू र न्यायिक अभ्यासको अन्तर्यमा त्यही मनोग्रन्थिको प्रभाव त छैन ? सायद राजनीति हाँक्ने शासकहरूले अदालतलाई प्रयोग गर्ने इच्छा त्यही बुर्जा न्यायप्रणाालीको आद्यरूप हो, जुन यदाकदा न्यायकर्मीहरूले देखाएका चिन्ताहरूमा व्यक्त भएको देखिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ १०:०८
महारानी आत्तिइन्, ‘राति त सुरूवाल लगाएरै कुरा गर्न जानुभएको थियो । खोइ त्यो सुरूवाल ?’
कार्तिक १५, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
नगरमा अकस्मात् हल्ला फैलियो, ‘शत्रुदेशको सैनिक रथ नगरमा प्रवेश गरेको छ ।’ शुरूमा नागरिकले पत्याएनन् । नगरमा रथ प्रवेश गर्न सक्ने एउटा मात्र द्वार थियो र त्यो एक वर्षदेखि बन्द थियो । यसबीच मित्रदेशका सामान्य रथ समेत नगरमा प्रवेश गरेका थिएनन्, न त नगरको कुनै रथ बाहिर गएको थियो ।
नगर–द्वारका कब्जा, चुकुल र ताल्चामा खिया लागिसकेको थियो । त्यसमाथि सेनाको अहोरात्र कडा पहरेदारी । नागरिकहरूलाई लाग्यो— यस्तो बेला सैनिक रथ, त्यो पनि शत्रुदेशको, कसरी नगरमा प्रवेश गर्न सक्छ ?
एक घडी बित्न नपाउँदै देखी जान्नेहरूले खबर ल्याए, ‘छिमेकी देशको सैनिक रथ आइपुग्नासाथ महाराजका सैनिकहरूले ससम्मान द्वार खोले र शानदार सलामी दिए । रथको अग्रभागमा छिमेकी राजाको नोकर शानका साथ बसेको थियो । ‘जय होस् सामन्तज्यूको’ भन्दै महाराजका प्रतिनिधिले ताजा फूलको माला लगाइदिएर उसको स्वागत गरे । उसले मुस्कुराउँदै ‘महाराजको सेवामा भरे हाजिर हुन्छु’ भन्यो र तीव्र गतिमा नगरको भित्री भागतिर लाग्यो । ऊ अहिले राजपरिवारका सदस्यहरूसँग पालैपालो भेटघाट गर्दैछ ।’
ऊ घाम अस्ताएपछि दरवार छिर्‍यो र मध्यरातसम्म महाराजसँग एकान्त वार्तामा व्यस्त भयो । रातको तेस्रो प्रहरमा महाराजले दरवारको ढोकासम्मै गएर उसलाई हात जोडेर विदाइ गरे । ऊ घाम झुल्केपछि रथ चढेर आफ्नो देश फर्क्यो । नगरको द्वार फेरि पहिले झैं बन्द भयो ।
दरवारको विदेश सचिवले तुरुन्तै झ्याली पिटायो ‘छिमेकी राजाको नोकर सैनिक रथमा चढेर आएको र उसले राति महाराजसँग एकान्त वार्ता गरेको कुरा सरासर झूट हो । त्यस्तो कुनै रथ नगरमा प्रवेश गरेको छैन, विदेशबाट कुनै व्यक्ति हाम्रो देशमा पसेको छैन र महाराजले शत्रुदेशको कुनै मान्छेसँग एकान्त वार्ता गर्नुभएको छैन । महाराजबाट यस्तो काम हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।’
यसैबीच महाराजको जीउबाट सुरुवाल गायब थियो । महारानी आत्तिइन्, ‘राति त तपाईं सुरुवाल लगाएरै कुरा गर्न जानुभएको थियो । खोइ त्यो सुरुवाल ?’
‘यतै कतै होला नि । हेर न,’ महाराज भित्तातिर आँखा डुलाउन थाले ।
‘सुरुवाल लगाएर गएको मान्छे सुरुवाल नलगाई फर्कनुभएको छ । मैले यहाँ के हेर्नु ?’ महारानी महाराजका सामुन्ने उभिइन् र आँखामा आँखा जुधाएर सोधिन्, ‘कि लग्यो तपाईंको सुरुवाल फुकालेर, त्यही साइँदुवाले ?’
महाराज केही बोलेनन् । ट्वाल्ल महारानीको मुखमा हेरी मात्र रहे ।
‘कस्तो हुतिहारा तपाईं पनि । अब दुनियाँका सामु के लगाएर उभिनुहुन्छ ?’ उनले रुन्चे स्वरमा भनिन् ।
महाराज केही नबोलेपछि उनले विश्वस्त मन्त्रीहरूलाई बोलाउन पठाइन् । महारानीबाट इतिवृत्त सुनेपछि वरिष्ठ मन्त्रीले भारी शब्दमा चिन्ता जाहेर गर्‍यो, ‘राष्ट्रवादको सुरुवाल अपहरण हुनु राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर खतरा हो ।’
‘धेरै चिन्ता नगर । राजकाजमा कहिलेकाहीं यस्तै हुन्छ,’ महाराज चीसो स्वरमा बोले, ‘सुरुवाल लगे पनि उसले धोती उपहार दिएर गएको छ । यही लगाउँला न ।’
‘अर्को सुरुवाल सिलाए हुँदैन ?’ यो महारानीको स्वर थियो ।
‘तिमी राजकाज बुझ्दिनौ । म रातभरि त्योसित गुच्चा खेलेर बसेको त होइन नि,’ महाराजले भने, ‘अब राजगद्दी जोगाउन यही लगाउनुपर्ने भएको छ ।’
‘जो हुकुम सरकार,’ वरिष्ठ मन्त्रीले भन्यो, ‘तर, शत्रुको नोकरलाई आफू सरह मानेर स्वागत गरेको, सामन्त भनेर चाकरी गरेको, ऊसँग एकान्त वार्ता गरेको भनेर जनताले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसमाथि सुरुवाल छोडेर धोती लगाउन थालेको देखे भने तिनको विरोध थामी नसक्नु हुन्छ ।’
‘धोती नलगाएको थाहा पायो भने उसले त्योभन्दा डरलाग्दो संकट खडा गरिदिन्छ,’ महाराज ङिसिक्क हाँसे । उनको स्वर थोरै मधुरो थियो, तर त्यसमा निराशा थिएन । उल्टो उनी आश्वस्त र दृढ प्रतीत हुन्थे ।
‘किन रोइस् मंगले, आफ्नै ढंगले,’ महारानीले ओठ छड्के पारिन्, ‘यति मात्र हो कि अरू पनि आदेश दिएको छ त्यसले ?’
‘हेर्दै जाऊ न । सबै कामकुरा तिम्रै सामु हुने त हो,’ महाराजको मुस्कान रहस्यमय थियो ।
मन्त्रीहरूले निकैबेर माथापच्ची गरेर सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय आविष्कार गरे— महाराजको दौराको फेर लम्ब्याएर गोलीगाँठासम्म पुर्‍याउने ।
भोलिपल्टदेखि महाराज किशोरीहरूले लगाउने ‘वन पीस ड्रेस’ जस्तो लाग्ने दौरा लगाएर हिंड्न थाले । सुरुवालको सट्टा धोती लगाएका हुन्थे, जसलाई दौराले छोपिदिन्थ्यो । जनताले ठान्थे, उनले सुरुवाल नै लगाएका छन् । माथिदेखि तलसम्म सोलोडोलो एउटै दौरामाथि कोट, टोपी र जुत्ताको पहिरन अद्भुत देखिन्थ्यो ।
तीन दिन पछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सामन्त’ का दुई साथी देखिए । दौराको नयाँ अवतार देखेर उनीहरू छक्क परेका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि महाराजले तिनलाई मञ्च पछाडि एकान्तमा बोलाए र दौरा उचालेर धोती देखाए । एउटाले आँखा चम्काउँदै दाहिने हातको चोर औंला र बूढी औंलाका टुप्पा जोडेर स्याबासी दिएजस्तो गर्‍यो र अर्काले दुवै हात शिरमा पुर्‍याई ढोगेजस्तो गर्‍यो । उनीहरू प्रसन्न भएको देखेर महाराजको जीउ चंगा भयो ।
अर्को दिन महाराज सदर टुँडिखेलमा दशैंको पीङ उद्घाटन गर्न गएका थिए । रातो रिबन काटेपछि तालीको गडगडाहटबीच जोशैजोशमा पीङ मच्चाउन थाले । दुई–चार सर्को त राम्रै भयो, त्यसपछि हावाको एउटा झोक्काले उनको दौरा ह्वात्तै उल्टाइदियो र दौरामुनिको धोती सार्वजनिक गरिदियो । चचहुई गर्दागर्दै मुजा खुस्किइसकेको रहेछ, सेतो धोती लामो झण्डासरि आकाशमा लहराउन पुग्यो । समारोहका विशिष्ट अतिथिहरू र सर्वसाधारण त्यो दृश्य देखेर एक छिन त स्तब्ध भए, त्यसपछि ठूलो हाँसो उठ्यो । महाराज हतारहतार पीङबाट ओर्लेर केही नबोली दरवार फर्के ।
अकस्मात् आइलागेको यस दुर्घटनाले भारदारहरू किंकर्तव्यविमूढ हुन पुगे । यसलाई के भन्ने, कसरी रफ्फू गर्ने, कसैलाई थाहा थिएन । यस्तो वेला आपसमा सल्लाह गरेर एउटै बोली बोल्नुपर्छ भन्ने पनि तिनलाई हेक्का रहेन । फलस्वरूप आआफ्नै बुद्धि बमोजिम परस्परविरोधी वक्तव्य दिन थाले ।
बेलुका वरिष्ठ भारदारले नगरको एउटा चोकमा उभिएर घोषणा गर्‍यो, ‘सुरुवाल धरि विदेशीले खोसेर लैजानु र महाराज नांगिनु भनेको सारै लाजमर्दो कुरा हो । इतिहासमै यस्तो घटना भएको थिएन । यो शत्रुदेशको षड्यन्त्र हो । हामी एक भएर यसको भण्डाफोड गर्नुपर्छ ।’
अर्को चोकमा अर्को भारदार भन्दैथियो, ‘सुरुवाल विदेशीले खोसेको होइन, महाराजले आफैं जिम्मा लगाउनुभएको हो । अगाडि, पछाडि दुवैतिर च्यातिएर सुरुवाल च्याङ्लो भइसकेको थियो । त्यसले महाराजको लाज बचाउन सक्तैनथ्यो । त्यसैले मगन्तेलाई दिई पठाउनुभएको हो । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।’
तेस्रो भारदारले वक्तव्य दियो, ‘महाराजको सुरुवाल हराएको भन्ने हल्ला भ्रामक, कपोलकल्पित र दुराशयप्रेरित छ । सुरुवाल कतै गएको छैन, महाराजले स्वयं धारण गर्नुभएको छ । महाराजको कुशल नेतृत्वमा देशले हासिल गर्न लागेको समृद्धिबाट आँखा तिरमिराएकाहरूले मात्र सुरुवाल नदेखेका हुन् । तिनले आफ्नो आँखाको उपचार गराउन् ।’
चौथो भारदार बढी नै उप–बुज्रुक थियो । उसले भाषण गर्‍यो, ‘राजाको नोकरलाई पनि हामीले राजा नै मान्नुपर्छ । त्यसैले महाराजले नोकरसँग होइन, राजासँगै कुराकानी गर्नुभएको हो भन्ने बुझ्नु उचित हुन्छ । यस घटनाले महाराजको अतुलनीय शक्ति, सामर्थ्य एवं पराक्रम प्रकट गरेको छ, जसबाट दुनियाँ चकित भएको छ । यति महान उपलब्धिसामु सुरुवाल हराउनु र महाराजले धोती लगाउन थाल्नु तपसिलका कुरा हुन् । तिनको कुनै अर्थ छैन ।’
राजपरिवारको एक सदस्यलाई भने महाराजले धोती उपहार पाएको थाहा पाएर प्रचण्ड छटपटी भयो । ऊ ‘सामन्त’ का साथीहरूको डेरामा पुग्यो र अकमकाउँदै गुनासो गर्‍यो, ‘धोती त म पनि लगाइहाल्थें नि । पहिले पनि लगाएकै हो । किन मलाई बेवास्ता गर्नुभएको ?’
‘तिम्रो भर छैन,’ उसले जवाफ पायो, ‘हामीसँग धोतीको कुरा गर्छौ, अर्काको जडाउरी मागेर पाइन्ट लगाउँछौ । यस्तालाई कसरी पत्याउनु ?’
त्यहाँबाट निराश भएपछि उसले राजपरिवारका अरू सदस्यहरूसँग चोचोमोचो मिलायो । सुरुवालको बहानामा महाराजलाई घेराबन्दी गर्न पक्ष–विपक्ष सबैको सल्लाह मिल्यो । सबै जना आआफ्नो घरको झ्यालबाट मुन्टो निकालेर कराउन थाले, ‘महाराजले सुरुवाल गुमाइसकेका छन् । सुरुवाल नभएको मान्छे राजा हुन सक्तैन ।’
मानिसहरू तिनको अनुहार हेर्थे, फिस्स हाँस्थे र आफ्नो बाटो लाग्थे ।
जति कराउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेपछि उनीहरू घरबाट निस्केर चोकमा जम्मा भए र ‘गद्दी कसको ? सुरुवालको,’ ‘नांगा महाराज, गद्दी छोड’ नारा लगाउँदै दरवारतिर लागे । जनता तिनलाई हेरेर हाँसिरहेका थिए । ताली बजाइरहेका थिए । त्यसलाई आफूप्रतिको समर्थन ठानेर उनीहरू दंग परिरहेका थिए ।
दरवार सामु पुगेपछि उनीहरूको स्वर झन् उच्च भयो । जनता त हाँसिरहेकै थिए, महाराज पनि कौसीमा निस्के र उनीहरूलाई देखेर अट्टहास गर्न थाले । सडक पेटीमा नाङ्लोपसल थापेर बसेकी बूढीआमै धारे हात लगाउँदै च्याँट्ठिइन्, ‘गतिछाडा हो, महाराजलाई मात्र के गाली गर्छौ ? पहिले आफैंलाई हेर ।’
उनीहरू झस्किए, र आफ्नो जीउतिर हेर्दा भए ।
कसैको जीउमा पनि सुरुवाल थिएन !
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ ०९:५४